မန်းညွန့်ဦးမောင်ကလေး၊ အငြိမ့်မင်းသမီးကို ရည်းစားထာ...
24 ส.ค. 2562 - 02:25 น.
မမြရင်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ၅ နှစ်က အထက်အညာ သာစည်နယ်က ရွှေဖလားကန်ရွာကလေးမှာ မွေးခဲ့ပြီး ၁၉၄၅ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မပြီးခင်ကလေးမှာပဲ မန္တလေးနားက ကျောက်ဆည်နယ်က ဧည့်ပြဆိုတဲ့ ရွာကလေးမှာ ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပါတယ်။ ရွာမှာမွေးပြီး ရွာမှာပဲ မထင်မရှား ဇာတ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ မမြရင်ဟာ ခေတ်ကောင်းစဉ်အခါမှာတော့ ရန်ကုန် မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာ ထိပ်တန်းဆိုတဲ့ မင်းပရိသတ်ကို ကပြသီဆိုခဲ့တဲ့ သဘင်သည်တယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထဲက ထင်ရှားတာက ဦးသဝန်ကြောင်၊ ရေစက်ချ ၊ ၉၁ ဌာန၊ သော့တွဲ၊ ရှင်တခုပဲ၊ သခွတ်ပန်း စတဲ့တေးတွေပါ။ သူ့ချစ်သူဟာ မမြရင်ဆီကို လူပြက်တွေ၊ သီချင်းရေးဆရာတွေ ဝင်တာထွက်တာလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ဒီအကြောင်း တွေကို သိတဲ့ သီချင်းရေးဆရာတွေက မမြရင်ဇာတ်လမ်းတွေကို သီချင်းစပ်ပေးကြတယ် ဆိုသလို သူ့ချစ်သူကိုယ်တိုင်က တေးရေးဆရာတွေကို ရေးခိုင်းတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ မန္တလေးအကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ ရေးတတ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးထွန်းအောင်ကျော်က ပြောပါတယ်။ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်က မမြရင်ကို တောမင်းသမီးဘဝက ခိုးပြေးဖို့ ကြံခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကလည်း ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ချစ်သူက စိုးရိမ်တာလည်း မဆန်းပါဘူး။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း စစ်ပြေးရင်း သူတို့ ကွဲသွားကြပုံရပါတယ်။ မမြရင်ရော သူပါ စစ်ကိုင်းက ဦးမောင်ကလေးရဲ့အဘိုး ဇာတိ ခိုတောင်ကို ပြေးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဦးမောင်ကလေးရဲ့ပြိုင်မြင်းတွေကို ဧရာဝတီမြစ်ထဲက ကျွန်းတွေ ပေါ်မှာ အမျိုးတွေဆီ အပ်ထားရတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မန်းညွန့်ဦးမောင်ကလေး၊ အငြိမ့်မင်းသမီးကို ရည်းစားထားခဲ့သူ